Imiyalo 'Sofradeks' ukusetshenziswa
Ukulungiselela "Sofradeks" isetshenziselwa ukwelapha izifo ezibangelwa amagciwane yi ingxenye anterior samehlo: blepharitis, keratitis, conjunctivitis, sclerites, iridocyclitis, itheleleke isikhumba eczema nezinkophe. Umuthi ubuye ngempumelelo ngokumelene ongaphandle otitis. Ifomu eziyisisekelo izidakamizwa ukukhululwa kukhona indlebe / ngeso amaconsi in vials, okuyinto ezibekwe ebhokisini elenziwe amakhadibhodi.
"Sofradeks" izidakamizwa. Yokusetshenziswa: ukwakheka, izakhiwo kwemithi
Ukwakheka izidakamizwa iqukethe izinto ezilandelayo esebenzayo: sulfate framycetin, gramicidin, dexamethasone. Izingxenye asizayo zihlanganisa lithium chloride, i-sodium citrate, citric acid monohydrate, phenylethyl utshwala, polysorbate 80, i-ethanol, amanzi ahlanzekile.
framycetin sulfate libhekisela eqenjini kwemithi ye aminoglycoside antibiotic. It has isinyathelo amagciwane kwephula izinqubo zamagama wamaprotheni molecule kumaseli amagciwane abe nenkani. I-antibiotic iyasebenza ngokumelene Gram (Proteus, uhudo imbewu eletha, Escherichia coli) kanye igremu omuhle (pneumococci, staphylococci) nezilwanyana ezincane. Ingqikithi asebenzayo siyasebenza neze ngokumelene streptococci, anaerobic flora, amagciwane abangela izifo, isikhunta. ukumelana ukuthi likhiqizwa kancane kakhulu. Gramicidin has bacteriostatic, isinyathelo amagciwane iphumelela ngokumelene streptococci, staphylococci, Amagciwane izifo anaerobic.
Dexamethasone iphathelene zokwenziwa glucocorticoid, ke akakubangeli egcina amanzi, i-sodium emzimbeni. Lokhu kwaziswa asebenzayo has a anti-iguliswa, eqeda ukuvuvukala, nomthelela obonakalayo desensitizing, ngakho cishe zonke ngenkuthalo suppresses ukuvuvukala ngokusebenzisa okusithiyayo ukukhululwa balamuli inqubo, ekunciphiseni capillary permeability futhi kwenye indawo kwe-mast amaseli. Lapho instillation ku iso ethintekile, kunciphisa izimpawu ubuhlungu, evutha, edwengula, photophobia.
Izidakamizwa "Sofradeks". Yokusetshenziswa: Isikali
In izifo bemvelo ezithathelwanayo netyazhologo esweni ngalinye sac conjunctival umbe ezimbili amathonsi nomuthi. Le nqubo iyaphindwa ngemva kwamahora amane. With ukuthuthukiswa izifo ezinzima ezithathelwanayo isikhathi asebenzayo kuyehla kube ihora elilodwa. Njengoba izimpawu wehlise inombolo instillation kufanele kancane kancane wehlise.
Lapho empeleni isibalo izifo instillations indlebe kanje: amathonsi ezimbili kane ngosuku. Isikhathi ukwelashwa kufanele singadluli iviki elilodwa, ngaphezu zonke lezo zimo, okuyinto ahambisana okusheshayo Dynamics omuhle.
"Sofradeks" izidakamizwa. Yokusetshenziswa: side effects, Izimo
Phakathi imiphumela emibi ezenzeka ngenkathi usebenzisa lokhu izidakamizwa, umbiko ubuhlungu, ukulunywa, ukucasuka evutha, imbangela dermatitis, yokucindezeleka okwandayo ehlweni, cataract kumiswa subkabsulyarnoy, thinning we sclera, i-cornea. Ezimweni ezingavamile kakhulu, kungenzeka ukuthuthukisa ikambiso yesibili ezithathelwanayo, izilonda ze-non-ephulukisa.
Umuthi ine Izimo ezilandelayo ukuze ukusetshenziswa: khona viral, izifo fungal, trachoma, hypersensitivity kuya izingxenye, isifo sofuba iso, tympanic ulwelwesi perforation esibuhlungu, ukuvuvukala, lactation, ukukhulelwa, kahle corneal isakhiwo EPITHELIAL, ehlambulula we sclera. Sebenzisa lesi sidakamizwa "Sofradeks" izingane akunakwenzeka, ngoba izinto zalo asebenzayo kungase kuyithinte kabi umsebenzi adrenal.
Izidakamizwa "Sofradeks". Yokusetshenziswa: imiyalelo ezikhethekile, ukweqisa izidakamizwa
Lokhu ukulungiselela akufanele asetshenziselwe umjovo intraocular. Iziguli kufanele isibindi, ukungasebenzi kwezinso, akunakwenzeka ukusebenzisa imithamo enkulu izidakamizwa, ngoba kubathinta kungase kuthinte lezi zitho. Umuthi has nomthelela obalulekile amakhono ukulawula imoto, imishini kuyingozi futhi ngaleyo ndlela is hhayi Kunconywa ukusebenzisa amahora ambalwa ukuze afeze manipulations ezinjalo.
Overdose kuhambisana kobukhulu anda amathuba okuba nemiphumela engemihle. Ukuqeda miphumela kubalulekile ukusebenzisa ngesenzo lingaze futhi bayeke izidakamizwa "Sofradeks". Acinene amathonsi safaka kungavunyelwe ngoba kubangelwa ukumuncwa zabo egazini ukuthuthukiswa imiphumela anobuthi yingozi.
The best izidakamizwa ezingekho hormone aphumelela ukuya esikhathini: Uhlu, incazelo, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Umuthi 'Cere'. Analogs, izinkomba kanye nemiphumela engemihle
Umuthi 'Glucosamine ": analogue, yokusetshenziswa, ngempela
'Calcium okusebenzayo' BAA: Umhlahlandlela, ukubuyekezwa
Imithi umkhuhlane: kunqunywa kukhethwa amathuluzi amahle
Indlela yokuthola umthamo webhetri wezinombolo zezinyathelo zefoni, izinyathelo kanye nempendulo
Izikhangibavakashi eKrethe ngemoto. Yini ukubona eKrethe bebodwa? Crete ezikhangayo
Isikhathi zesikhashana isimo: Izinkinga, Ezombusazwe, Umphakathi
"Kamikaze" - cocktail wenza into oyithandayo. Recipe, ukubunjwa, ukushintshashintsha
Ifenisha kanye idivayisi ethempelini
Ubuhlobo amabanga amade futhi kanjani Londoloza
Ukuhamba nge-bright: ukuklama, izinketho ezithakazelisayo nezincomo
Kanjani ukuze agobe ipayipi ngaphandle eguqa ithuluzi ngezandla zakho?